Nhau - Joinha Higg Index
Joinha Higg Index
Iyo Higg Index
Yakagadziriswa neiyo Sustainable Apparel Coalition, iyo Higg Index isutu yezvishandiso zvinoita kuti mabrands, vatengesi, uye zvivakwa zvehukuru hwese - padanho rega murwendo rwavo rwekusimudzira - kuyera nenzira kwayo uye nekukwikwidza kuita kwekambani kana kwechigadzirwa. Iyo Higg Index inounza muongororwo wakazara uyo unopa masimba kumabhizimusi kuita shanduko ine musoro inochengetedza hupenyu hwevashandi vefekitori, nharaunda dzemunharaunda, uye nharaunda.
Higg Facility Zvishandiso kuyera zvakatipoteredza uye zvemagariro kugadzikana zvinokanganisa munzvimbo dzekugadzira kutenderera pasirese. Kune maviri maHigg Mahara Zvishandiso: Higg Nzvimbo Yemamiriro ekunze Module (Higg FEM) uye Higg Nzvimbo Yemagariro & Yevashandi Module (Higg FSLM).
Kumisikidza Kuyerwa kweZvemagariro uye Zvemamiriro Ekunze mune Zvivakwa
Nguo, shangu, uye kugadzirwa kwemachira kunoitika kuzviuru zvezvivakwa pasirese. Nzvimbo yega yega inoita basa rakakosha mukusimudzira kweiyo indasitiri. Iwo maHigg Mahara Zvishandiso anopa akaenzana magariro uye ezvakatenderedzwa ongororo izvo zvinofambisa hurukuro pakati pevashandi veketani vadyidzani kumagariro uye nharaunda nekuvandudza matanho ese muketani repasi rese rekukosha.
Higg Nzvimbo Yemamiriro Ekunze Module
Mari yezvakatipoteredza yekugadzira uye kupfeka hembe yakakwira. Kugadzira akajairwa majean kunogona kuda anoda kusvika zviuru zviviri zvemarita emvura uye mazana mana megajoules esimba. Kana yangotengwa, kutarisira iyo imwechete yejean muhupenyu hwayo hwese kunogona kuburitsa anopfuura makumi matatu makirogiramu ekabhoni dhayokisaidhi. Izvo zvakaenzana nekutyaira mota 78 mamaira.
Iyo Higg Facility Environmental Module (Higg FEM) inozivisa vagadziri, mabrands, uye vatengesi nezve mashandiro ezvemamiriro ekunze ezvivakwa zvavo, vachivapa simba rekukwirisa kusimudzira.
Iyo Higg FEM inopa zvivakwa mufananidzo wakajeka wezvavanokanganisa nharaunda. Izvo zvinovabatsira kuziva uye nekuisa pamberi mikana yekuvandudza mashandiro.
Higg Nzvimbo Yemagariro & Yevashandi Module
Wese munhu anofanirwa kushanda munzvimbo yakachengeteka uye ine hutano kwaanowana mubairo wakanaka. Kuvandudza magariro pamwe nemashandiro evashandi vanogadzira mabhiriyoni ehembe, machira, uye shangu gore rega rega, zvigadzirwa uye vagadziri vanofanirwa kutanga kuyera kukanganisa kwenzvimbo dzepasirese.
Iyo Higg Facility Yemagariro & Yevashandi Module (Higg FSLM) inosimudzira yakachengeteka uye isina tsarukano yemagariro uye yezvemamiriro ezvinhu evashandi vecheni vekutengesa pasi rese. Zvivakwa zvinogona kushandisa iyo yakarongwa kuongororwa kuti unzwisise nzvimbo dzinopisa uye kuderedza kuneta kwekuongorora. Panzvimbo yekutarisa kutevedzera, ivo vanokwanisa kupa nguva nezviwanikwa mukuita inogara systemic shanduko.
Enderera mberi kujoina HIGG kuti uwane hunyanzvi hwekuzviongorora iyo inogonesa kambani kuongorora mhando dzemhando, zvigadzirwa, zvigadzirwa zvekugadzira uye maitiro enzira mukati mezvakatipoteredza uye zvigadzirwa dhizaini sarudzo.
Iyo HIGG Index ndeye yakajairika yekusimbisa yekushandisa chishandiso chinoshandiswa nevanopfuura zviuru zvisere zvevagadziri uye zana nemakumi mashanu epasi rose.Inobvisa kudiwa kwekudzokorora kuzviongorora uye kunobatsira kuona mikana yekuvandudza mashandiro.
Post nguva: Apr-05-2020